नारी संवाददाता , असार ८, २०७५
बलिउडकी नायिका दीपिका पादुकोणजस्तै भन्ने कमेन्ट सुन्दासुन्दै आफूमा नायिका हुन सक्छु भन्ने विश्वास पलाएको उनी बताउँछिन् । निकिता भन्छिन्–यदि भोलि बलिउडमा नायिकाका रूपमा देखा परें भने पनि अचम्म हुने छैन किनभने मेरो सपना धेरै टाढाको छ । -- पुरै पढ्नुहोस् --
कर्णालीमा धेरै राम्रा कुरा छन् तर त्यसको चर्चा हुँदैन
पदम भण्डारी, असार ८, २०७५
कर्णालीका बासिन्दालाई दु:ख गर्न सक्ने एवं तत्कालै प्रतिक्रिया दिन सक्ने हिम्मतिला मानिसका रूपमा चिनिन्छ । कर्णालीका मानिसहरूले मागेर खाँदैनन् । कर्णालीका मानिस कर्मशील छन् । कर्णालीका मानिस चोर र डाँका छैनन्, आत्महत्या गरेर मर्नेहरू छैनन्, भए पनि नगन्य छन् । उपलब्ध साधनहरू थोरै भएकाले विकल्पहरूका बारेमा सोंच्ने क्षमता राख्छन् । -- पुरै पढ्नुहोस् --
चलचित्र ब्लाइन्ड रक्सका लागि शरीर घटाउने क्रममा फिटनेस फ्रिक बनेकी बेनिशाले त्यसपछि आफूलाई मेन्टेन गर्दै आएकी छिन् । अहिले उनको फिगर आकर्षक छ । नियमित जिम जाने हमाल पब्लिक फिगर भएपछि फिट एन्ड स्मार्ट हुनुपर्ने धारणा राख्छिन् । हरेक दिन जिम गर्ने बेनिशा २० मिनेट कार्डियो तथा वेट लिफ्टिङ गर्छिन् । -- पुरै पढ्नुहोस् --
डा. अनिल नेपाल आएका बेला उनीहरू भेटघाट गर्थे । त्यतिबेला घुम्न कतै टाढा जाँदा कसैले देख्ने हो कि भन्ने चिन्ता डा. अनिललाई हुन्थ्यो, त्यसैले उनीहरू नजिकैको रेस्टुराँमा पुग्थे । विवाह गर्ने समयमा मनीषाले शिक्षण अस्पतालको जागिर छोडिन् । अहिले मनीषा आफ्नी दुई वर्षीया छोरीको स्याहार गरेर दिन बिताउ“छिन् भने परिआएका बेला मोडर्न हर्ट क्लिनिकलाई समय दिन्छिन् । -- पुरै पढ्नुहोस् --
ब्युटीफिक स्लिमिङ एण्ड स्पा
नारी संवाददाता , असार ७, २०७५
वालुवाटार सिमाना मार्गमा ब्युटिफिक स्लिमिङ एण्ड स्पाको उद्घाटन कोरियोग्राफर, मोडल तथा कलाकार प्रशान्त ताम्राकारले एक समारोह विच गरेका छन् । ब्युटी सम्बन्धि सबै सेवाको साथमा स्लिमिङ, मसाज थेरापी, सोना, स्टिम यहाँ उपलब्ध छ । -- पुरै पढ्नुहोस् --
पिनट बटर र बनाना आइसक्रिम डेरी फ्री डेजर्ट हो । यसलार्ई कुनै पनि समय बनाएर डेजर्टका रूपमा खान सकिन्छ, जसलार्ई क्यालोरीको चिन्ता छ उनीहरुका लागि पनि यो डेजर्ट परफेक्ट हुन्छ । यो आइसक्रिममा अरू आइसक्रिमको तुलनामा आधा मात्र क्यालरी हुन्छ । यो आइसक्रिम बनाउन ३ वटा सामग्री मात्र चाहिन्छ । -- पुरै पढ्नुहोस् --
मनमौजी दीपाश्री निरौला
नारी संवाददाता , असार ६, २०७५
विद्या बालन, तथा हेमा मालिनीबाट प्रभावित दीपा त्यस्तै ड्यासिङ पर्सनालिटीमा देखिन चाहन्थिन् । त्यसैले पनि उनी खानामा मनमौजी भएकी हुँ । शाकाहारी भएर होला दीपालाई पनिर, मसरुम तथा गुन्द्रुकका सबैजसो परिकार मीठा लाग्छन् । गुन्द्रुकको परिकार पाकेको दिन उनी अरू बेलाभन्दा बढी नै खान्छिन् । -- पुरै पढ्नुहोस् --
स्वच्छ वातावरण तथा आर्थिक समृद्धिका लागि पुष्प व्यवसाय भन्ने नाराका साथ कृषि विकास मन्त्रालय एवं पुष्प विकास केन्द्रको सहकार्यमा फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालले भृकुटीमण्डपमा उक्त पुष्प मेला आयोजना गरेको हो । -- पुरै पढ्नुहोस् --